Ruvara - Sewing Thread, Embroidery Thread
MH inotarisira kutsigira vatengi nemhando yepasi-tambo mavara. Dhirowa kubva raibhurari yemavara inosanganisira anopfuura zviuru gumi zvemvuri, Mh kadhi yemuvara inopa 400 mumvuri sarudzo, zvakare Mh inopa mhinduro nekukurumidza kune dhayi-kusvika-mechi tambo yemuchina kubereka, nguva dzose inoenderana nezvido zvako zvekusona.
Kuti tibatsire kuenzanisa kusiyana kwemavara, nyanzvi dzakagadzira ruvara rwekuyera. Kutarisa rumwe ruvara rwechivara nzvimbo nenzvimbo yemavara, tinokwanisa kushandisa nhamba chaiyo kuti tione kusiyana pakati pemirau. Kune huwandu hwemavara emavara akawanikwa.
Kubatsirwa kwemuvara wekuyera
Mukuwedzera pakushandura mararamiro echinhu ichi kuva nhamba chaiyo yezvinyorwa zvisinganzwisisiki mumutambo wechiratidzo, inobatsirawo kuchengetedza ruvara rwekushandura, kuita kuti mavara akafananidzwe uye kutaurirana kwemavara. Kugoverwa kwenyika yose mumakambani ekugadzira michina kunoda kukwanisa kutaurirana kwenguva pfupi nemararamiro nemaitiro pasi pose. Nokushamba kwemavara, data yakadaro inogona kunyatsoendeswa kunzvimbo dzinodiwa nenzira yakakodzera.